आखिर किन र कसरी मनाइन्छ क्रिसमस डे ? - Nepali Online News Nepal
आखिर किन र कसरी मनाइन्छ क्रिसमस डे ?
December 23, 2019 December 23, 2019 Bishwaghatana0Comments christmas day 2019, christmas day 2019 calendar, December 25, last posting day for christmas 2019, restaurants open on christmas day 2019 near me, what restaurants are open on christmas day, आखिर किन र कसरी मनाइन्छ क्रिसमस डे ?, क्रिसमस, क्रिसमस डे
७ पौष २०७६ काठमाडौँ: विश्वभर अहिले क्रिसमस इभको तयारी भइरहेको छ । विश्वभरका मानिस क्रिसमस इभ र क्रिसमस डेलाई मन खोलेर मनाउने गर्छन् । पहिले इशाई समुदायेका मानिसले मात्र यो पर्व मनाउने गर्थे तर अहिले समय परिवर्तन भए सँगै यो पर्व सब जातिका मानिसले मनाउने गर्छन् । क्रिसमस डे २५ डिसेम्बरमा पर्छ र यस दिन लगभग सम्पूर्ण विश्वका सबै देशहरुमा सार्वजनिक विदा दिइन्छ। क्रिसमस देखि १२ दिनको उत्सव क्रिसमसटाइडको पनि शुरुवात हुन्छ।
जिसस क्राइस्ट जन्म दिन भएकाले सो दिनलाई क्रिसमस डे मनाएको हो । दुई हजार १६ वर्षअघि जेरुसेलमको बेथलेहममा येशुको जन्म भएको थियो । कुमारी मारियमको कोखबाट येशुको जन्म भएको हो । यो दिन देशभरका चर्चमा प्रार्थनालगायत कार्यक्रम गरी येशु ख्रीष्टको सम्झना गरिँदैछ । यस अवसरमा राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघले राष्ट्रिय सभागृहमा ख्रीष्टमस महोत्सव आयोजना गरेको छ ।क्रिसमस डेको दिन सुभकामना आदान प्रदान गरिन् छ ।
यो दिन येशुको शिक्षा एवं उपदेशको मनन पनि गरिन् छ ।क्रिसमस डे अवसरमा ठमेल ,बौद्ध पाटन लगायत ठाउँहरु विशेष रोनक हुने गर्छ ।येशुलाई जिसस क्राइस्ट पनि भनिन्छ । जिसस क्राइस्टले मानव समुदायका लागि पुर्‍याएको योगदानको सम्झनामा इस्वी संवत् चलाइएको विश्वास गरिन्छ । हाल नेपालभर १२ हजारभन्दा बढी चर्च र ३० लाख ७५ हजार भन्दा बढी ख्रीष्टियन समुदाय रहेको अनुमान छ । क्रिसमस डे को दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिदै आएको छ । नेपालमा ४०० वर्षअघिदेखि क्रिसमस मनाउन थालिएको हो ।।
← IPL 2020 Players List: आईपिएल खेल्ने सबै टिमका खेलाडीको अपडेट
यस्तो छ रुसले बनाएको विश्वकै खतरनाक पनडुब्बी →
आज क्रिसमस डे, इसाई धर्मालम्बीहरुलाई मात्र बिदा
December 25, 2019 December 25, 2019 Bishwaghatana0